15000W လျှပ်စစ်စကူတာစက်ရုံ - တရုတ် 15000W လျှပ်စစ်စကူတာ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
bicicletas လျှပ်စစ် chinas
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော 72V 70ah အကောက်ခွန်မဲ့ 72V 70ah ဖြုတ်တပ်နိုင်သော Lithium Battery ပရိုမိုးရှင်းအပါအဝင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအပါအဝင် Wheel Citycoco လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များစွာရှိပါသည်။MQi GT Evo ၏အခြားရွေးချယ်စရာများမှာ အရောင်လေးမျိုး၊ သော့မဲ့စက်နှိုးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ခိုးယူမှုစတီယာရင်ဘီးလော့ခ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။Nebula N1 သည် ပြီးပြည့်စုံသောခရီးစဉ်မှ ပျော်ရွှင်မှုရရှိရန် အရည်အသွေးမြင့် တောင်ပေါ်စက်ဘီးတွင် သင်လိုချင်သောအင်္ဂါရပ်အားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ဝယ်ယူခြင်းထက် စောစီးစွာ ဂရုပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကို အတိအကျသိရန် မှတ်တမ်းပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားလျှပ်စစ်စက်ဘီးဝယ်သူများ၏ အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးပါ။အီး-စက်ဘီး.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် လျှပ်စစ်စက်ဘီး နှစ်ဘီး
FIM သည် 2019 လျှပ်စစ် Moto Grand Prix စီးရီးအတွက် ပြိုင်ကားပုံစံဖြစ်ရန် Energica မှ ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် နယ်ပယ်အများအပြားတွင် Johammer သည် လုံးဝလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။Portable Electric Scooter ရှိဖို့ ဘာကြောင့် အသုံးဝင်တာလဲ။၎င်းသည် သင့်အတွက် ခရီးဆောင်လျှပ်စစ်စကူတာဖြစ်ပါက ဖြေရှင်းရန် သင့်အား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။Aprilia ဖက်ရှင်တွေမှာ ပြိုင်ဘက်တွေ ရှိနေတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ဆိုင်ကယ်များ၏ scooter အတန်း.ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါ့ပါးပြီး ခေါက်နိုင်သော အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်စကူတာများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး၊ ပိုကြီးသောအမြန်နှုန်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ထိရောက်မှုရှိသော ဖက်ရှင်များ၏ အစားထိုးတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သို့သော် ပုံမှန်စီးနင်းမှုအတွက် အလွန်စျေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ်စကူတာခေါက်ကစ်စကူတာ 84v 20000w ထုတ်ကုန်
ငါတို့ဒီဇိုင်း၊ ငါတို့ ထုတ်လုပ်ခြင်း။,ကျွန်ုပ်တို့ ပေါင်းစပ်ပြီး လျှပ်စစ်ကား ထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များ၊ မော်တာများနှင့် ပြန်လည် ရှင်သန်ခြင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ချိန်ညှိခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။စိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်း၊ ထောက်ပံ့ရေးငွေတောင်းခံလွှာ၊ ဆိုင်းထိန်း၊ ဘရိတ်၊ အရှိန်၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် လှပသောရထား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Blades သည် Curtiss 1 ဒီဇိုင်းဒဿန၏ အဓိကကျပါသည်။ဤပုံစံသည် ၎င်း၏ လုံးဝ ခရမ်းရောင် ကိုယ်ထည်၊ အနက်ရောင် အနားကွပ်များ၊ ကိုယ်ထည် နှစ်ရောင်စပ် ဒီဇိုင်း၊ စစ်မှန်သော Campagna ကာဗွန် ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် သားရေဖြင့် ပတ်ထားသော အားကစား လှုပ်ရှားမှု စတီယာရင်ဘီးတို့ နှင့်အတူ အမှန်တကယ် ပေါ်လွင်ထင်ရှားပါသည်။ဝင်ပေါက်ဘီးအတွက် အနည်းဆုံး 100mm နဲ့ နောက်ဘီးအတွက် 135mm ရှိရပါမယ်။သို့သော်၊ တိုရွန်တိုမြို့မှ ဝန်ထမ်းများသည် e-scooters ဝယ်ယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုတစ်ခုစီအတွက် ဈေးဝယ်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းစံနှုန်းများ လိုအပ်ကြောင်း ဇွန်လ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သတိပေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။အသက် 20 သက်တမ်းရှိ CG125 သည် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် အသစ်စက်စက် စျေးသက်သာသော လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချနိုင်မည်ဟု သင်စောဒကတက်နေသေးသည်။ပြီးခဲ့သောအပတ်က မိတ်ဆက်ခဲ့သော ဒေလီရှိ EV လွှမ်းခြုံမှုအသစ်သည် မြို့တော်အတွင်း လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဥ်များဝယ်ယူရန်အတွက် ဗဟိုအာဏာပိုင်များ၏ FAME အစီအစဉ်အရ ပံ့ပိုးပေးထားပြီးဖြစ်သည့် ထောက်ပံ့ကြေးများနှင့်အထက်တွင် မြို့တော်အတွင်း လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများဝယ်ယူရန်အတွက် ငွေကြေးမက်လုံးများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ပိုဆိုးလာပါက အဆိုးဆုံးဖြစ်လာပါက ဝယ်သူစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရေး အာမခံချက်ပေးနိုင်ရန် ထိုနေရာတွင်ရှိနေသော Amazon ကဲ့သို့ လက်လီရောင်းချသူများမှတစ်ဆင့် ဤမော်ဒယ်ကို ဝယ်ယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
13Inch Double Shock Absorption Folding 15000w လျှပ်စစ်စကူတာ
Controller: china Brand၊72V/200A
မော်တာ- 72V/7500W Brushless Motor (7500W*2pcs)
ဘက်ထရီ- 72V70A လီသီယမ် ဘက်ထရီ
ဘရိတ်စနစ်-2Wheels ဆီဘရိတ်
မီး- ရှေ့နှင့်နောက် LED မီးများ၊ ကွေ့မီးများ
လျှပ်စစ်စကူတာခေါက် အီးစကူတာ bicicleta electrica 15000w
ပစ္စည်းများ – ဖရိမ်- အလူမီနီယမ် အလွိုင်း၊ ရှေ့တာယာများ- လေဖြည့် ရော်ဘာတာယာများ (အင်ဂျင်တပ်ထားသော)၊ နောက်တာယာများ- Airless Honeycomb
ဘရိတ်များ- Disc ဘရိတ်များ
မော်တော်-7500W Front Hub မော်တာ
စီးနင်းမုဒ်များ-3Speed ​​Modes၊ Cruise Control
ချိတ်ဆက်မှု- Bluetooth မှတဆင့် iOS နှင့် Android အက်ပ်၊
မက်တယ်။Throttle Speed ​​: 85 mph / 135 km/h
မိုင်အကွာအဝေး- 90 မိုင် / 140 ကီလိုမီတာ
တောင်တက်နိုင်မှု : 20°
ဘက်ထရီ- Lithium-Ion 72V 70Ah
အားသွင်းချိန်: 8 နာရီ
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ- ခေါင်းလောင်း၊ ရှေ့မီး၊ Kickstand
* ခရီးသွားအကွာအဝေးကို အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာသည်- အလေးချိန် 420 ပေါင် (200 ကီလိုဂရမ်)၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲ လူသွားလမ်းကြမ်း၊ အများဆုံး 60%။အရှိန်။မတူညီသောအလေးချိန်ဝန်၊ မြေပြင်အနေအထား၊ လေတိုက်နှုန်း၊ စီးနင်းမှုပုံစံနှင့် အခြားအချက်များပေါ်မူတည်၍ စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
* သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှုအတွင်း တာယာဖိအား ကျဆင်းသွားနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့် အကွာအဝေးကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးပါ။အကြံပြုထားသောတာယာဖိအားသည် 28 psi ဖြစ်သည်။
monopattino elettrico pro 72v လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w
●15000Wdouble wheel motor သည် အမြင့်ဆုံး 85km/h အမြန်နှုန်းကို ပေးသည်။
● 80Ah (70Ah မှ အဆင့်မြှင့်ခြင်း) 72V Li-ion ဘက်ထရီ (ထုတ်ကုန်တွင် ပါ၀င်သည်) အမြင့်ဆုံး မိုင်တိုင် 160 ကီလိုမီတာ။
● သင့်ကားစည်တွင် သယ်ဆောင်ရအဆင်ပြေစေရန် အမြန်ခေါက်ဒီဇိုင်း။
● အများဆုံး 400 ကီလိုဂရမ် ဝန်အားအတွက် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းခွံ။
● အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် အပျော်သဘော သင့်တော်သည်။
1 x လျှပ်စစ်စကူတာ
1 x လက်စွဲစာအုပ်
တရုတ်နိုင်ငံမှ 72v 15000w hot patinete electrico လျှပ်စစ်စကူတာ
မင်းထင်ရင်လျှပ်စစ်စကူတာများဒေသဆိုင်ရာ သွားလာရေး အတွက်သာ ကောင်းမွန်ပြီး အရှိန်အဟုန်မြင့်၍ မရနိုင်ပါ၊ ထပ်စဉ်းစားပါ။ခေတ်မီ e-scooters များသည် မော်တာ (အမြန်နှုန်း) နှင့် ဘက်ထရီ (မိုင်အကွာအဝေး) တို့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို ပေးဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်လျက်ရှိသည်။၎င်းတို့သည် သင့်အား မော်တော်ဆိုင်ကယ်အများစုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အရှိန်ဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
သင့်အား မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်ပေးစွမ်းနိုင်သော လျှပ်စစ်စကူတာတစ်စီးကို သင်ဝယ်လိုပါသလား။ဒါဆိုရင် မင်းနေရာမှန်မှာ ရောက်နေပါပြီ။ကျားနက်ကဲ့သို့ အားကောင်းပြီး ထက်မြက်သော လျှပ်စစ်စကူတာ Currus Panther နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ပြီးတော့ အရမ်းလှတယ်!
အီးစကူတာ ထရိုတီနက်လျှပ်စစ်၊ စကူတာ အီလက်ထရစ်ကို 15000w
အကောင်းဆုံးကို ရွေးတဲ့အခါလျှပ်စစ်စကူတာဝယ်ယူရန်၊ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်စကူတာလောကတွင် အသစ်ဖြစ်နေပါက ရွေးချယ်မှုမှာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်နိုင်သည်။အမှန်တကယ်တွင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်စကူတာကိုရွေးချယ်ခြင်းထက် သင်၏နောက်လာမည့်လက်ပ်တော့ သို့မဟုတ် တီဗီကို ရွေးချယ်ရန် ပို၍ခက်ခဲပေမည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအစိမ်းရောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများသည် ၎င်းတို့၏အင်္ဂါရပ်များနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများတွင် အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဘယ်ဟာက သင်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ သိဖို့ စူပါနည်းပညာ ဗဟုသုတ မလိုအပ်ဘဲ ရှည်လျားတဲ့ စစ်ဆေးမှုစာရင်းကို ဖြတ်သန်းဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
အမှန်တကယ်တွင်၊ အကွာအဝေးနှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း၊ အလေးချိန်နှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး ကုန်ကျစရိတ်သည် ထိပ်တန်းမက်ထရစ်များနှင့်အတူ ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကူညီပေးသည်။
Project 10000w/15000w အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ်စကူတာ 72v
•မြန်နှုန်း- 85 မိုင်
• အကွာအဝေး- မိုင် 80 မှ 90 အထိ
• မော်တာ- 7500W 72V brushless မော်တာ။
• ဖရိမ်- အလူမီနီယမ်ကုန်းပတ်ဖြင့် ဆန့်နိုင်အားမြင့်သော သံမဏိဘောင်။
• Drive စနစ်- ကွင်းဆက်ဒရိုက်။ရှေ့နှစ်ထပ်နှင့် အနောက်ဆိုင်းထိန်းနှစ်ခု။လှည့်ကွက်။
• ဘက်ထရီ- 72v/70ah လီသီယမ်ဘက်ထရီ။
• အားသွင်းချိန်- ၈-၉ နာရီ။
• ဘရိတ်များ- ရှေ့နှင့်နောက်ဆီဘရိတ်များ။
• အတိုင်းအတာ- အလျား- 60"
လက်ကိုင်ဘားတွင် အကျယ် : 20"
• အလေးချိန်- 120 ပေါင်။
• တင်ဆောင်နိုင်မှု- 400 ပေါင်။
• တာယာများ- အရွယ်အစားကြီးမားသော အဆုတ်ရောင်တာယာများ။
• အာမခံချက်- တစ်သက်တာနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် 356 ရက်အာမခံ။
မြန်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w အီးစကူတာ
MAX LOAD: 450 ပေါင်
SINGNAL မီးလုံးများ- ဘယ်နှင့်ညာ လှည့်ပါ။
အားသွင်းရန်အတွက် USB ပလပ်ပါရှိသော ဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ- ပါ၀င်သည်
လည်ပတ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲ- ပါဝင်သည်။
သော့များ- ခလုတ် ၄ ခု ပါဝင်ပါသည်။
နှိုးစက်စနစ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်- ပါဝင်သည်။
(အခိုက်အတန့်) ဂေါက်ကွင်း/စျေးဝယ်အိတ်အတွက်- ပါဝင်သည်။
ဂေါက်ကွင်း- ရွေးစရာ $162.50
နောက်အိတ်- ချန်လှပ် $36.89
SCOOTER ဦးချို- ပါဝင်သည်။
တရုတ်လျှပ်စစ်စကူတာစျေးနှုန်း 10000w / 15000w အရွယ်ရောက်ပြီးသူ
1. ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် အရည်အသွေးသေချာစေရန် စမ်းသပ်ရန် အထူးလူတစ်ဦးရှိသည်။
2. အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများ ရှိရမည်။
3. ထုတ်ကုန်အားလုံး CE၊ FCC၊ ROHS ၊ UL နှင့် အခြားအောင်မြင်ပြီးအောင်လက်မှတ်များ
2၊ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို 24 နာရီအတွင်းပြန်ကြားလိမ့်မည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသိပေးပြီး လိုအပ်ပါက စက်ရုံတွင် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို စီစဉ်ကူညီပေးပါ။
4၊ ဝယ်ယူသူသည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အခမဲ့သင်တန်းအတွက် နည်းပညာရှင်အား ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။